Sidee Ayey Cudurada Ku Faafaan? | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Dhallinyarannimada iyo Cidhiidhiga Siyaasadda
Sideed Ku Kasban Kartaa Jaceylka Dadka Kale |Tukesomalism.com
Usama Cismaan, April 7, 2016
Waa Maxay Erayada Suuq-gaynta Ee Halkudhigga Ah “slogan”?
Cabdijabaar Sh. Axmed, December 28, 2016
Miski Cabdinuur Salal — March 6, 2020
Waxaa jiro cudurada badan oo ay sababaan Bakteeriyo, Fayrus, Fungaay, iyo Goryaano kuwaas oo marka ay qof ku dhacaan u gudbi karo qof kale oo caafimaadka qabo,waxa ayna ku gudbi karaan qaab toos ah ama qaab aan toos aheyn. Maantay waxaan wax badan ka oggaaneynaa sida ay cudurada ku faafaan.
Cudurada Waxa Ay U Faafaan Qaab Badan Waxaana Kamid Ah:
Faafida qaabka tooska ah, Qaabkana waxa uu dhacaa marka qofka caafimaadka qabo ay soo gaaraan dheecanada qofka xanuunsan sida: candhuufta IWM.
Faafida qaab hawo ahaan ah, qaabkaani waxa uu ku faafaa cudurka marka qofka xanuunsan uu qufaciisa iyo hindhisadiisa ay gaaraan qofka kale.
Faafida qaab ah taabashada wax-yaallaha geermiska leh, cudurada qaabka ay ku faafaan ayey kamid tahay in aad taabato Alaabo jeermis leh, tusaalle in taabato sariir uu qof xanuunsan ku jiifay walina aanan la nadiifin, ama aad taabto bir aad u daxaleysatay, faafida waxa ay billaabmeysaa marka aad gacantii aad ku taabtay agabka germiska lahaa aad saarto sankaada ama afka inta aadan dhaqin ka hor.
Cunnista cunooyinka ay geermiska ku dhasheen, waxaa macquul in aad la yaaban tahay sida uu qof u cunni karo cunno geermis uu ku dhashay. Aqriste germiska si fudud ayuu cunnada ugu dhalan karaa, tusaalle cunno oo aan si fiican loo bisleyn ama waqti badan ay dabool la’aan ay aheyd.
Cayayaanka qaar waxa ay faafiyaan cudurada. Cayayaanka waxa uu ku faafiyaa cudurka qaab qaniino ah, asga oo qofka buko qaniino, ka dibna u isii gudbiyaan qof kale uu qaniinay, waxaana kamid cayaankaas: kaneecada,shilinta IWM.
Cabista biyo aan nadiifka aheyn waxa ay faafiyaan cudurada goryaanka laga qaaddo kaas oo qofba qofka kale u gubin karo.
Haddii aan isla oggaaney sida ay cudurada u faafaan kaallay aan isla oggaanee sida looga hortaggo.
Wax-yaallaha aan ugu hortaggi karno cudurada waxaa kamid ah;
Mar waliba in aan gacmaheenna nadiifino.
In aan cabbno biyo nadiif ah.
In aan qaaddano tallaalka cudurada looga hortaggo.
in aan cunnada hilibka ay kamid yihiin aad u karinno.
In aan daboolno Afkeenna marka aan qufaceenno ama aan hindhisooneynno.
Ilmaha in aan barno marka ay wax waliba taabtaan in gacma dhaqdaan ka hor inta aysan taaban sanka ama Afkooda.
Tags: Sidee Ayey Cudurada Ku Faafaan?
Next post Waligaa Ma Aragtay Midaan oo Kale, Maxay Dumarkan Wejiga u Marsadeen Dhiigga Caaddada?
Previous post Qaabkii Xulashada Gayaanka ee Soomaalidii Hore